Skål wuxuu amaan u hayaa Walter Kenneth "Ken" Whitty
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Skål wuxuu amaan u hayaa Walter Kenneth “Ken” Whitty
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Skål wuxuu amaan u hayaa Walter Kenneth “Ken” Whitty
Walter Kenneth "Ken" Whitty
Waa murugo aad u daran in la shaaciyo gudbinta Skålleague Ken Whitty, MD, Flow Inter Co. Ltd., qeybiyaha Paulaner Beer iyo cabitaannada.
Walter Kenneth “Ken” Whitty, 1952 - 2021, ayaa dhaafey kadib markii uu la dagaalamay kansarka.
Shirkadda Ken waxay ahayd shirkad muddo dheer kafaala qaaday Skål Bangkok iyo Pattaya, Thailand.
Madaxweynaha shirkadda caalamiga ah ee Skål, Andrew J. Wood, ayaa khudbad ka jeediyey xafladdii gubitaanka Buddhist ee shalay lagu qabtay Wat Sri-Iam ee Bangkok.
Isagoo jira 69 sano Ken wuxuu la dagaalamayay kansarka sanadihii la soo dhaafay. Wuxuu ku dhashay Waterford, Ireland, Ken wuxuu markiisii ​​ugu horaysay yimid Thailand 1999 wuxuuna si dhakhso leh u aasaasay Danmark Co. . Oo ay la socdaan Cornish Orchard Cider iyo Abbona Wines. Ken wuxuu ahaa MD iyo Khun Kanpitcha (Toi), Ken xaaskiisuna waa Agaasimaha Fulinta. Waxay dhisteen ganacsi guul leh oo soo dejinaya khamri caan ah iyo cabitaanno. Shirkadda leh maalgalinta xooggan waxay noqotay mid la mid ah OKTOBERFEST halkan Thailand.
Flow Inter Co. Ltd. sidoo kale waa kafaala-qaade waqti dheer ah Skål ee Bangkok iyo Pattaya, oo si joogto ah u taageeraya xubnaha iyo kulamada muddo 14 sano ah oo lala yeeshay Paulaner Beers iyo cabitaanno kala duwan.
Andrew J. Wood, Madaxweynaha Caalamiga ah ee Skål, intii lagu guda jiray xafladii gubitaanka Buddhist ee shalay lagu qabtay Wat Sri-Iam ee Bangkok, ayaa soo gudbisay hadal kooban oo ammaan ah. “Isagoo dhoola cadeynaya saaxiibtinimadiisa diiran, Ken wuxuu si joogto ah uga qeybgalayay dhacdooyinka warshadaha oo inbadan oo shirkadiisa ay kafaala qaaday oo ay taageertay. Hadday ahaan lahayd Rugta Ganacsiga ee Boqortooyada Ingiriiska (BCCT) ama Rugta Jarmalka (GTCC) iyo kuwa kale, ama dhacdo warshad dalxiis iyo dalxiis - sida Skål ama FBAT - Ken, Toi, iyo kooxduna aad bay u taageereen, ”ayuu yidhi Wood.
Ken wuxuu ka tagay dhaxal adag waxaanan la gaarnay Toi iyo qoyska jacayl iyo taageero waqtigan. Ken aad baa loogu riyaaqay wuuna murugoon doonaa dhammaanteen inta nolosheenna taabtay. Waxay la jirtaa qalbi culus iyo murugo badan waxaan u barooranaynaa geerida saaxiibkeen. ”
Skål waa urur xirfadlayaal ah oo hogaamiya dalxiiska aduunka oo dhan kaasoo kobciya dalxiiska iyo saaxiibtinimada adduunka. Waa kooxda kaliya ee caalamiga ah ee mideysa dhamaan laamaha safarada iyo dalxiiska. Xubnaheeda, maareeyayaasha warshadaha iyo fuliyayaasheeda, waxay ku kulmaan heer degmo, heer qaran, heer gobol, iyo heer caalami ah si ay uga doodaan ugana daba galaan mowduucyada danta guud.
Tallaalka COVID-19 hadda waa khasab dhammaan Air Canada ...
Suuqa nidaamyada qiiqa baabuurta wuxuu gaari doonaa $ 68.45 ...
Fashion -ka Adduunka: Doorka Taiwan iyo Sri Lanka ee ...
Uganda oo si elektaroonig ah u maamusha ka ganacsiga duurjoogta ...
Soo degista Farxada leh ee Seychelles: Dhadhanka Jannada!
UNWTO oo u guureysa Sacuudi Carabiya: Xoghayaha Guud ...
Dalxiiska Jamaica oo Qabtay Wadahadalo Maalgalineed oo Muhiim ah
Qatar Airways: Khasaaraha duulimaadyadu hoos buu u dhacay, dakhligiina wuu kordhay ...
Barnaamijka Maareynta COVID-19 oo uu bilaabay Premier ...